Liibiya oo badbaadisay Tahriibayaal u kala dhashay Somalia, Nigeria, Ivory Coast & Sudan. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Liibiya oo badbaadisay Tahriibayaal u kala dhashay Somalia, Nigeria, Ivory Coast &...
Liibiya oo badbaadisay Tahriibayaal u kala dhashay Somalia, Nigeria, Ivory Coast & Sudan.
Xeebaha Liibiya waxaa lagu badbaadiyay 33-ruux oo Tahriibayaal ah kaddib markii cilad soo wajahday doontii ay la socdeen sida ay warisay Warbaahinta Gudaha oo soo xigatay saraakiil katirsan Ciidanka ilaalada ka haya Biyaha Dalkaas.
Doonta ayaa ka tagtay Xeebta Zuwara 2-dii saq dhexe Talaadadii, balse waxaa soo baxay Warar sheegaya in cilad soo wajahday, xaalad halis ah ayay galeen balse gurmad degdeg ah oo gaaray ayaa lagu guuleystay in lasoo badbaadiyo.
Shems FM oo kamid ah Warbaahinta Gudaha Liibiya oo la hadashay saraakiil kala duwan oo ay kamid yihiin kuwa Bisha Cas waxa ay daabacday in dadkaan ay u kala dhasheen Dalalka Soomaaliya, Suudaan, Ivory Coast & Nigeria.
Waxaa kamid ahaa dadkaan 4-Carruur & 8-Dumar ah, Qorshahoodu waxa uu ahaa in ay gaaraan Dalalka Yurub iyaga oo ka tallaabaya Biyaha Caalamiga iyo Badda Mediterranean-ka inkasta oo aanay u suuragelin hamigooda.
Haweenka Qaar waa Xaamilo (Uur leh), waxaana la dhigay Isbitaalka Zarzis oo gaar ah u ah Hooyada iyo Dhallaanka, xaaladdooda waxaa gacanta ku heysa Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga oo la wareegtay mas’uuliyadda sida hadalka loo dhigay.
Liibiya waxa ay kulmay Ajaanib dhalinyaro u badan kuwaa oo u tagay in ay kasii tahriibaan si ay u saldhigtaan Qaaradda Yurub oo ay u arkaan in ay ku helayaan Nolol uga wanaagsan tan Dalalkooda, balse waxa ay la kulmaan dhibaatooyin badan halka mararka qaar ay geeriyoodaan.
Previous articleMahdi Guuleed oo ka haray doorashada aqalka sare ee goboladda Waqooyi.
Next articleShabeelaha Hoose: Ciidan katirsan Xoogga Dalka oo Qarax loo dhigay.